Home Wararka Muudey: Waxaad noqotay “Xabaale Qode Xabaalkiisa la Qoday”
Muudey: Waxaad noqotay “Xabaale Qode Xabaalkiisa la Qoday”
Cabdiweli Ibrahim Muuddey oo ahaa G/K/Kowaad ayaa Maanta kabaha looga siibay garoonka Aden Cadde, laguna maarsiiyey wixii uu mudnaa kadib markii uu isku dayey inuu safro Baraawe si uu ugu tartamo kurigisiisa oo yaalla halkaas.
Madax badan oo waxaa jiray welina jira aan sankood meel ka fog wax ka arag, waxna ka dareemin, Cabdiweli muxuu u fahmi waayey in Xabaale qodi xabaashiisa la qodi doono, markii uu NN ugu kaalmeynayey inay dhibaateeyaan madax badan,shacbi masaakiin ah iyo shaksiyaad ay u arakayeen inay yihiin waxgal.
Cabdiweli Muudey waxaa uu ahaa:
Ninkii 7 daqiiqo keenay in lagu rido Xasan Cali Kheyre.
Ninkii Jawaari in la eryo ka shaqeeyey.
Ninkii shaqeeyey muddo kordhintii fashilantay.
Maanta u sidaan u ooyo waxay ka mid tahay doqonimda dad badan ay qabaan, taas oo ay ku jiraan xataa Fahad iyo Farmajo waayo:
Waxay maalin cad qaleen kuwii u shalay dharka u dhigtay Rabigoodana uga fogaaday.
Kuwii dembiyada u galay sida askarta dadka u dishay sida Sadaq Joon iwm.
Waxay cashar u dhigeen kuwa hadda ay rabaan inay u shaqeeyaan sidii ay ku soo noqon lahaayeen, kadibna looga dhigi lahaa kuwa ugu horreeya ee la cuno.
Habdhaqanka noocan ah waa caadada kalitialiyayaasha, waxaana tusaale dhow kuugu filan haddaad garasho leedahay ninka uu Farmajo ka dheegto habdhaqanka hogaaminta dalka ee Maxamed Siyaad, kaaso oo duhur cad dadka hortooda ku gowracay raggii Afgambiga ka soo shaqeeyey, fuliyey kadibna isaga ka dhigay hogaamiyaha Golaha sare Jen. Ceynaanshe, iyo Jen. Gabeyre .
Ohinta af laba yeerka ee Muudey waa bilow waxayna ku soo xigi doonta in isaga iyo uwa badan oo kale ay eedaan inay xataa ooyeen oo wax sheegteen.
Ujeedada Fahad, Farmajo iyo Lafatgareen waa:
In barlamanka laga saaro qof kasta oo ay dhici karto inuu wax ismoodo.
In Fahad jidka loo banneeyo oo laga reebo tartanka qofkasta oo Reer Awxasan ah sida Cabdiweli Muudey iyo Farah Sheekh Cabdulqaadir si kasta oo ay beeshooda u rabto, si Fahad uu u noqdo G/K/Koowaad ee Barlamanka.
In laga reebo barlamanka qofkasta oo Digil iyo Mirifle wax gal ah oo u soo joogsan karo gudoomiyaha Golaha Shacbiga si uu Laftagareen isugu sharraxo loona diido cid kasta oo la tartami karta.
In Marka guddoonka Barlamanka Gacanta lagu dhigo Farmajo si sahal ah loo soo saaro doorashadana lagu qabto Villa Hargeysa si aysan beesha caalamka uga soo qeybgalin.
Previous articleKenya oo ka dalbatay Deni in uu dalkeeda ka baxo
Next article[Daawo] Garbahaareey oo la shaaciyay in aanay Doorasho ka dhaceyn